China Cement Screw Conveyor Kugadzira uye Fekitori | Jusheng
Cement Screw Conveyor Kutengesa
Srew conveyor yainyanya kushandiswa kuendesa hupfu, granular uye zvidimbu zvidiki zvezvinhu zvine hunyoro. Yedu sikuru muchina unoshandiswa zvakanyanya mukongiri yekusanganisa chirimwa, asphalt kusanganisa chirimwa, chikafu, chemakemikari indasitiri uye mamwe maindasitiri; inogona kushandiswa kutakura samende, kubhururuka dota, mineral poda, jecha, chando uye zvimwe zvinhu. Zvigadzirwa zvemuchina: Mushini wepuruu wakagadzirwa nemhando yepamusoro simbi pombi, yakasimba uye yakasimba, uye ine kutendeka kwakanaka. Iyo mbiri pani blade inoderedza mwero wekumanikidza panguva yezvinhu zvekufambisa. Inotora yepamusoro-giya bhokisi, rinorema-basa dhizaini, hombe torque uye yakaderera ruzha. Iyo yekusarudzika yepasirese bhora mubatanidzwa inoita kuti kumisikidza uye kudhiraivha kugadzirisa kuve nyore. Yakashongedzerwa neepamusoro-soro yepakati kumiswa mabheyari uye muswe mabheyari, huwandu hwenzvimbo uye zvikamu zvekusara zvidiki, zvakaomarara, zviri nyore kuchengetedza, inlet uye nzira yekubuda zvakajairika, uye kumisikidza kuri kukurumidza
L (m) ∮168 (17t / h) ∮219 (40t / h) ∮273 (80t / h) ∮ 323 (110t / h)
Saizi ye screw conveyor inogona kugadzirwa kubva ku -168 kusvika ku-323, iyo yekurerekera degree uye kureba kunogona kuvezwa.
Mubvunzo: 1, 1000/5 / 5.5, "1000" yeiyo giya bhokisi mhando, "5" yeiyo yekudzikisa reshiyo, "5.5" ye .iyo mota simba (380V / 50Hz / 3P, 1450rpm);
2. Mota yakajairwa kumisikidzwa: 380V, 50Hz, 1450rpm, matatu-phase, vatengi vane zvakakosha zvinodiwa zvinogona kugadzirwa;
3. Kana paine akasarudzika mamiriro, anogona kusarudza zvinoenderana nemaitiro eual mamiriro emagetsi emagetsi (panzvimbo yakakosha, sarudza Inotevera faira simba).
Muchina wekumisikidza unogadzirwa nemhando yepamusoro pombi yesimbi, yakasimba uye yakasimba, uye ine kutendeka kwakanaka. Iyo mbiri pani blade inoderedza mwero wekumanikidza panguva yezvinhu zvekufambisa. Inotora yepamusoro-soro gearbox, rinorema-basa dhizaini, hombe torque uye yakaderera ruzha. Iyo yekusarudzika yepasirese bhora mubatanidzwa inoita kuti kumisikidza uye kudhiraivha kugadzirisa kuve nyore. Yakashongedzerwa nemhando yepamusoro yekumisa mabheyari uye muswe mabheyari, huwandu hwenzvimbo uye zvidimbu zvidiki, zvinogara, zviri nyore kuchengetedza, zvakajairika kupinza uye kutumira kunze, uye nekukurumidza kuiswa
Izvo zvakakosha zvezvinhu zvinofambisa conveyor: mota, bhokisi rekudzora, rekunze chubhu, yemhepo mandrel, yepakati crane Shaft, muswe unobereka, wepasi rose mubatanidzwa, inlet flange. Hunhu hwayo ndehwe: diki saizi, yakaderera ruzha, yakanaka chisimbiso, jira, Iyo bureau iri nyore.
Tsananguro yematanho makuru ehunyanzvi: modhi, kuendesa kureba, kuendesa kona, kuendesa vhoriyamu, feed feed port kubatanidza nzira yekubatanidza:
Pipe dhayamita A B C D
Otomatiki Aggregate Batching System, Concrete chisanganiso Spare Zvikamu, Automaticaggregate Batching Fertilizer Chisanganiso, Otomatiki Aggregate Batching Machine, Aggregate Batching Dosing Sisitimu, Aggregate Batching System,